Dagaal ka bilowday duleedka Buuhoodle iyo dagaalkii duleedka Laacaanood oo qaboobay – Radio Daljir
Dagaal ka bilowday duleedka Buuhoodle iyo dagaalkii duleedka Laacaanood oo qaboobay
Buhodle, Apr 1 -Dagaallo u dhaxeeya ciidamada maamulka Khaatumo State iyo maamulka Somaliland ayaa goor dhow ka bilowday deegaano ka mid ah gobolka Cayn, waxaana dhinaca kale qaboobay dagaalkii aroortii hore ee saaka ka bilowday duleedka magaalada Laascaanood.
Dagaalka oo markii hore ka bilowday deegaanka Gacandar 10-km dhinaca koonfureed uga began magaalada Laascaanood ayaa waxaa la isku adeegsaday hubka nuucyadiisa kale duwan, waxaana dagaalka markii dambe uu isku badalay dagaal ka curtay jihooyinka Bariga iyo koonfurta magaalada Laascaanood.
Ku dhowaad 15-qof oo ka kooban dhinacyada dagaalamay ayaa ku dhaawacmay dagaalkii ka dhacay deegaanada Waqdari iyo Gacandar ee duleedka magaalada Laascaanood, khasaaraha dhimasho ee dagaalka ayaan ilaa iyo hadda la ogayn inta uu gaarsiisanyahay.
Dhinaca kale, dagaallo xoogan oo daba socda dagaalada u dhaxeeya maamulka Khaatumo State iyo Somaliland ayaa ka dhacay jiidaha dagaal ee duleedka magaalada Buuhoodle, halkaasi oo marar badan dagaallo uu ka dhacay.
Cabdifitaax Kiisdiid oo ka mid ah saraakiisha dagaalka ee Khaatumo State ayaa u sheegay Radio Daljir inay soo gaareen dhimashada sadex askari iyo laba dhaawac ah, waxaa uu sheegay dhinaca Somaliland inay ka gubeen gaari islamarkaana ay jiraan dhaawacyo iyo maydad u dagaalamayay dhinaca Somaliland oo daadsan wadooyinka sida uu yiri.